Ingasese, i-cottage yothando 1 dbl igumbi lokulala + ibhokisi - I-Airbnb
Ingasese, i-cottage yothando 1 dbl igumbi lokulala + ibhokisi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMartha
Ukujonga i-Atlantiki, i-Westerbrake kukumka kuyo onke amava. Indlu epholileyo ye-croft, evalelwe kwindawo yabucala eselunxwemeni. Iimbono zolwandle, iBreckon Beach, izilwanyana zasendle, ukuhamba kunye nokuloba 'emnyango'. Baleka kuxinzelelo lobomi bale mihla-nxibelelana nendalo okwethutyana endaweni yoko! Indawo ebekwe ngokugqibeleleyo yokuhlola okanye yokukhwela iintaka i-Fetlar, i-Unst kunye ne-Yell kwaye ifikeleleka lula e-Shetland Mainland.
Siyavuya ukwamkela ukuhlala okufutshane ngaphandle kwexesha lonyaka kunye nomzuzu wokugqibela ndicela ubuze.
I-Westerbrake iye yahlaziywa ngothando. Iimpawu zokuqala, zakudala kunye nezakudala kunye nefenitshala zigcinwe naphi na apho kunokwenzeka ukuze uphawu lwayo olulodwa lisaqaqambe. Ukugquma kwanamhlanje emva kophahla lwamaplanga emveli kwenza i-cottage ifudumele kwaye ipholile - nasebusika.
Kukho ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala kunye nebhokisi yebhokisi yendabuko kwigumbi lokuhlala. Imilinganiselo yebhokisi yi-1.81m x 1.32m (5'11'' x 4'4''). Ayinabubanzi okanye inde ngokuphindwe kabini ngoko ke idweliswe njengengatshatanga kodwa inkulu kunomnye. Kufanelekile ukuba umntwana omnye okanye ababini abadala babelane. Iyakwazi ukwamkela abantu abadala ukuba nje imilinganiso ilungile kuwe.
Sibonelela ngebhayinotyhulayi, iimephu kunye nokhetho olubanzi lweencwadi zembali yendalo kunye nenkcubeko malunga neShetland kunye nommandla wasekhaya ukukunceda ukuba ufunxe indawo ekungqongileyo. Sikwabonelela ngokhetho lwemidlalo, iipuzzle kunye neencwadi zokukunceda uphumle.
I-cottage inesithethi esiphathwayo seBluetooth ukuze umamele umculo wakho ukuba unesixhobo esinikwe amandla seBluetooth. Kukho neendawo zokuhlawulela ze-USB kwigumbi lokuhlala. Kukho unomathotholo we-FM ukuba unqwenela ukunxibelelana nehlabathi langaphandle!
Igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa lineshawari yokuhamba ebanzi kunye nekhabhathi yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba. Kukho into yokomisa impahla ngaphandle.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze uziphekele ngeketile, itoaster, i-oveni yombane enehobs & negrill kunye nesikhenkcisi sefriji.
Nangona imeko ingasese, i-Westerbrake yimizuzu nje embalwa ukusuka kwivenkile yaseCullivoe yasekhaya apho unokuthenga khona izinto ezibalulekileyo. I-Yell inezinye iivenkile ezine ezigcwele kakuhle ezisasazeke kwisiqithi sonke kubandakanya ezintathu ezithengisa amafutha kunye nenye ephinda kabini njengekhefi.
I-Yell ineelwandle ezimbini zesanti eziphumelele iMbasa yoLwandle (kubandakanya iBreckon Beach kumgama nje ongephi) kunye nemayile emva kweemayile zonxweme ukuze uphonononge. Yonke into ukusuka elunxwemeni olunesanti ukuya kwiibheyi ezinamatye, amawa amangalisayo kunye nonxweme olunamatye athambileyo. Ikwanayo nowona mhlaba ugciniweyo we-peat eShetland ukuba i-sphagnum mosses, i-bog orchids kunye ne-sundews yinto yakho.
Kukho ibha yalapha kwiHolo yoLuntu yaseCullivoe evulwa rhoqo ngooLwezihlanu ebusuku.
Kukho iindawo ezininzi apho unokuthengela khona umsebenzi wobugcisa waseShetland kunye nobugcisa obuveliswe ngesandla eYell kubandakanya iShetland Gallery, iGlobalYell Textiles kunye neBurravoe Haa craft shop. (Kwiiyure zokuvula zamaxesha onyaka).
UMid Yell uneziko lokuphumla elinephuli kunye nejim kunye neziko lezempilo elinoogqirha kunye notyando lwamazinyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Martha
I live in the beautiful, wild and remote island of Yell in Shetland with my husband Malcie and our little collie dog. I've worked in nature conservation for 20 years - 12 of which were in Shetland and am currently a wildlife tour guide. Malcie has been long-serving with RSPB in Shetland. All of the wildlife and landscape photos in our listing were taken by him. We are delighted to be able to share our knowledge, advice and love of Shetland's fabulous wildlife with our guests.
Besides nature we both love music, food, art, World travel, good company and our dog.
I-Westerbrake ingamakhulu amabini eemitha ngaphaya kwendlu yethu, kwelinye icala lenduli. Ngokwenene ngamava 'ukusuka kuyo yonke' into yokuba neemfihlo ezipheleleyo esizihloniphayo ngoko ke siya kukuphepha ukuba kude nawe. Siya kufumaneka ukuze sincede kwaye sinikele naziphi na iingcebiso eziyimfuneko-kodwa kuphela xa sibuzwa.
I-Westerbrake ingamakhulu amabini eemitha ngaphaya kwendlu yethu, kwelinye icala lenduli. Ngokwenene ngamava 'ukusuka kuyo yonke' into yokuba neemfihlo ezipheleleyo esizihloniphayo…